Yikuphi uthola impendulo "Portrait of Dorian Gray": incwadi, ibhayisikobho, umdlalo
Mayelana wobuciko kungaba ngokuvamile liyokwahlulelwa yini Izibuyekezo umfundi kuso. "Portrait of Dorian Gray" kulesi sici - ngaphandle. Ngemva kwawo wonke lo msebenzi, okuyinto namuhla ubhekwa yakudala, hhayi kuphela English, kodwa futhi izincwadi zezwe, ngesikhathi ngokuthi nehlazo nangaphansi ukuhlasela okuvela baxgeki. Ngakho-ke, kuyoba ezithakazelisayo ukuze sibone indlela lokhu omunye impikiswano kakhulu futhi ezithakazelisayo ngesikhathi esifanayo imisebenzi beqonda zilimi.
"Dorian Gray" - liyincwadi kubenzima kokubili endabeni futhi lihlaba esikhonkosini umqondo umbono. Labhalwa edumile Umlobi oyiNgisi Oscar Wilde amasonto amathathu nje kuphela. Ngabona ukukhanya 1890. Benamandla wanqoba ekupheleni kwekhulu umoya ephikisayo, egcwele allegories eziyinkimbinkimbi zefilosofi, lo msebenzi ngokushesha amehlo umphakathi okuqukethwe engavamile futhi lezo zinkinga ngokucindezela ukuthi luphakamisa.
Le noveli isitshela indaba i eliselincane ngokungavamile. Ubizwa elihlanyiswa intsha okuphakade futhi alondoloze sikhalo sabo ebonwayo, siveza isifiso ukuthi sihlale njengoba enhle, namandla, enempilo, kanye eko bakhe bokuqala. La mazwi kwezinye ngendlela engavamile zigcwaliseka. Kodwa-ke le nsizwa iqala ukuba siphile ukuphila antule ukuzithiba, futhi isithombe sakhe iqala ukubonisa ukunwetshwa ubuntu kwangaphakathi protagonist. Ekugcineni, asikwazanga athwale ukwazi ukonakala siqu, Gray ezama ukonakalisa umdwebo, kodwa esezibulala, waba umuntu bagongobaliswe ubudala.
Akumangazi ukuthi isihloko impikiswano abaluthola Izibuyekezo okuxubile. "Portrait of Dorian Gray" - inoveli lapho sebuningini izingqimba zingahlukaniswa zibe. Kodwa isithombe eyindida kunazo zonke kuye kwabangela umlobi umphakathi wesimanje ahlukile ngesiNgisi. Abaningi bakubona konkhe loko njengoba ngomzamo ngodaka azi, abanye baye babonisa ukuthi umbhali dedengu wahlulele abameleli kwezakhi ephakeme sabantu. Namuhla, ngokwehlukanisa, incazelo yomhlaba ocebile lwaziswa ngokukhethekile kumfundi wanamuhla. Ngesisekelo umbhalo kule noveli, bathole umbono walokho kwaba imibuthano eliphakeme yezikhulu ngasekupheleni kwekhulu nesishiyagalolunye.
Lesi sici sokuhlakanipha noveli sithola, njengoba umthetho, okubuyayo. "Portrait of Dorian Gray" esikhathini sethu uthathwa njengomgcini ezithile, acacile futhi ikholisa ukukhiqizwa kabusha bokubeka imikhuba, amasiko nendlela yokuphila ke izikhulu. Abasebenzisi abaningi be-uthi kuyikhono undoubted nabanekhono yembhali kwebalingisi ezikhathini zanamuhla kuye. Ngakho, lokho wayeke wakhonza njengephayona isihloko ukugxekwa, manje ubiza Izibuyekezo rave ezivela kubafundi.
Ngokulinganiswa storylines lelandzisako yayiyiminyaka elikhulu nokunye ukubuyekezwa ambalwa. "Portrait of Dorian Gray" lichaza ekwakheni kusobala ukuthi ukubhekisela imisebenzi odumile Balzac "shagreen". Ngakho-ke, umphakathi ukufunda isikhathi, isimiso, wayejwayelene umlando efanayo. Nokho, umlobi odumile French akazange agxile izinto eziningi kangaka lapha zefilosofi, kodwa kunalokho phezu ingxenye emphakathini. Wazama ukunikeza isithombe ephelele kunayo yonke sisakubona wesimanje umphakathi okusezingeni eliphezulu, lapho umugqa kumnandi ne shagreen isikhumba zamkhonza nge indlela ephumelelayo embule ukuphelela omkhulu kunayo yonke futhi ukunemba emhlabeni kwangaphakathi protagonist.
Wilde ngesikhathi esifanayo emlandweni waso, uye waqinisa ingxenye ezingaqondakali ngomqondo ukuthi zilethwe kuqhame ekuguquleni Psychology umlingisi, isimo lakhe elingaphakathi, Ukuwohloka okuyinto ngokucacile ngakho sibonakala ngokwanda portrait. Lokhu kuthutha ngempela emoyeni ngesikhathi sakhe. Nokho, abafundi banamuhla cabangela lokhu imibono yamaSoviet waphumelela ngokukhethekile futhi kujabulise. abaqondisi Ziningi ngisho lo mbono, futhi ngisho yezinhlobo horror Thriller, bezama ukuba uhlaziye umsebenzi umlobi.
Mayelana umlingisi lomcoka
Mhlawumbe umsebenzi edume kunazo Oscar Wilde kuyinto noveli "The Isithombe Dorian elimpunga." Izibuyekezo yencwadi ekuqaleni ludale, ngisho ingxenye enkulu ezimbi. Kodwa kulezi zinsuku umkhiqizo buthola ukuhlolwa omuhle ngokwengeziwe. Uhlamvu main usebenza - omunye izithombe impikiswano kunawo izincwadi emhlabeni. Ekuqaleni, kubonakala njengendlela, ehlanzekile indoda elikhanyayo abasha abanombono romantic. Nsizwa ukuzikhohlisa, elula, okwazi olumsulwa (lutho umculi B. Hallward umbona njengoba indoda ekahle). Nokho, kamuva kuye bathi sebeshintshe ngokuphelele kuthinta abafundi. Kancane kancane, ngaphansi kwethonya imfashini hedonist baphikise iNkosi uHenry, yena wallows e okuphambene.
Izimo yokugcina kuye kwabangela igagasi ukugxekwa ngesikhathi, njengoba abantu abaningi abakubheka njengomklamo zokuziphatha okubi isithombe esinjalo eningiliziwe izinkanuko womuntu omnyama. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi umlobi abayekanga ngokuningiliziwe ku incazelo yokuwa yangaphakathi bobuntu bakhe. "Portrait of Dorian Gray" ibonwa ngokuhlukile kancane kulezi zinsuku. Izibuyekezo yencwadi, omuhle kakhulu, futhi ekwindla umlingisi ukuqonda umqondo zefilosofi, okuyinto kakade siye samenyezelwa enovelini eziphawulwe ngenhla okunzima Balzac: into esemqoka - kuba isimo sangaphakathi ngokomoya kunokuba ingcebo zangaphandle nokuchuma, okuyinto ababefuna kokubili namaqhawe.
Mayelana iNkosi uHenry
Omunye izinhlamvu Ayindida kakhulu futhi impikiswano encwadini - kuyinto umuntu kwaphoqa le nsizwa endleleni umjikelezo. Wafaka kuye embonweni wokuthi udinga ukuthatha konke kusuka ekuphileni, futhi Kwavezwa ukudabuka mayelana temporality wobusha nobuhle. Lo muntu wayengumngane iNkosi uHenry - kummeleli umphakathi eliphakeme isiNgisi, sybarite onendlu uhlamvu baphikise nomuzwa elingavamile amahlaya.
Le noveli "The Isithombe Dorian Gray", okuyinto libuyekeza isihloko lokhu kubuyekezwa, ukhunjulwa ngabaningi lo uhlamvu engavamile. Emlonyeni wakhe umbhali ubeka ukugxeka futhi caustic of wesimanje ngasekupheleni umphakathi uVictoria. Ukuba sybarite ngomqondo ukucobelelana ngobuhlakani nangamandla, Nkosi uHenry uhlose ukuqinisekisa ukuthi umfana uthola ngendlela zobugebengu. Lona ongomunye wabalingiswa inkani kakhulu futhi impikiswano in the wonke umsebenzi. Kusebenza njengomnyombo oyengela ebulilini kobusha, surreptitiously kuyisunduzele ngokumelene izenzo ezingekho emthethweni, sandla inkohlakalo yalo futhi abe umuntu ichithekile.
Umsebenzi "Portrait of Dorian Gray", ukubuyekezwa esibonisa ukuthi ziyangqubuzana singaphansi, okuqukethwe kanye nencazelo lomqondo, izinhlamvu engavamile isithombe ezithakazelisayo, ezicashile kanye kukholakale kwengqondo zabo. Kulokhu, it kuqhakambisa isithombe esezosebenza Vane. Nanguya actress abampofu kodwa abahlakaniphe kakhulu. Wayehlala a eqanjiwe, izwe waseshashalazini, owawungumnyaka elijabulisayo ngaphambi kokuhlangana D. elimpunga. Yena lolungenamaphutsa ngacula izindima eyinhloko repertoire kaShakespeare kanye ithalente lakhe engavamile yakhanga le izwele insizwa, lapho eyibona enkundleni esiteji, ngokushesha sathandana.
I love story line master kweqiniso ukuhlaziywa ngokwengqondo bazibonakalisa G. Wilde. "Portrait of Dorian Gray", ukubuyekezwa okuyizinto ngokuvamile omuhle - noveli nge eziyinkimbinkimbi uthando umugqa. ukuphela kwakhe okubuhlungu ngezindlela eziningi wakhonza khona njengenceku Umfutho baye bathi sebeshintshe ngokuphelele ezinyantisayo protagonist. Cishe zonke abafundi bangena esivumelwaneni sokuthi uhlobo isithakazelo wentombazane, kuyinto engavamile kangangokuthi walahlekelwa ithalente lakhe emangalisayo njengoba isikhathi lapho ngempela uthando futhi wazama nisuke emhlabeni yokufakelwa ukuthi asaphila. Ukubona ukuphoxeka Gray, yena wazibulala.
"Dorian Gray" - ifilimu mayelana nokuthi iziphi izinhlelo izimpendulo babekhona futhi impikiswano enkulu, lahoxiswa ngo-2009 (kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi Wilde picturized izikhathi ezingaphezu kuka amathathu). ababukeli abaningi baye bagxekwa yona lwendaba ukuthi is kakhulu washintsha, owethulwa umlingisi omusha zesifazane eboniswe ngendlela engafanele izithombe namaqhawe. Abanye abasebenzisi awanelisekile neqiniso lokuthi umqondisi ukwenze tincenye Thriller futhi horror esithombeni, ezifana ekushintsheni ukubukeka ngayo udaba lomdwebo. Njengomkhulumeli umlingisi umculi main iye yavusa impikiswano, ngokungafani kuya K. Firth (ababedlala iNkosi uHenry), Improvisation eyawela emphakathini ukunambitha.
Nokho, enye ingxenye abantu omuhle beqonda zokuhlola filmmaker uhamba. Ukuvunyelwa okubangelwa lokubuka ubuhle bendawo nokubingelela zokubhukuda amafilimu. Nokho, labo bajwayelene ncwadi, omubi waqonda ushintsho kulo msebenzi zakudala.
I eziseduze yokuqala yencwadi enesihloko esithi "I Isithombe Dorian Gray" isibuyekezo se-movie okuyinto kokuphelele omuhle kakhulu. Lokho ubudala itheyiphu omnyama nomhlophe wadedelwa ngo-1945. Yena uqokelwe eziningi imiklomelo ehlonishwayo futhi imiklomelo (kuhlanganise "Oscar"). Le filimu Wamukelwa ngemfudumalo yibo bobabili a baxgeki nezethameli, nakuba umehluko nge umbhalo msebenzi Nokho, okuyinto, zincane. Ikakhulukazi yabakhanga A. umdlalo Lansbury. Ukuze Kuhle Ukusekela Umlingisikazi, wanikezwa "Golden Globe". Inani elikhulu ezincwadini okubonisa isithakazelo Ngokuqhubeka omphakathi ukuba ale ncwadi ngokwenza ngokwakho Umlobi oyiNgisi.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi udaba oluyinkimbinkimbi futhi iphikisana ezinjalo ngeke kuthathwe njengoba isisekelo ukudalwa ukusebenza zomculo. Noma kunjalo, umqambi American Robert Bauer wabhala umsebenzi eponymous, kwesizini ezweni eyaqala ngo-2010. Musical "I Isithombe Dorian Gray", lapho izimpendulo babenjengomuntu eziphikisa njengoba isihlobo nomsebenzi kanye ifilimu yayo lithathelwe, kuhlanganisa tincenye drama, eziyinkimbinkimbi polyphonic abahlabeleli. Yena eyayifakwe Solo ashukumisayo ngokwanele. Ngakho ukusebenza ikhompyutha izithombe yakhiwa izakhi ezibe ababukeli oyingqayizivele waqonda.
Fans of the umbhalo inoveli akathandanga ukuba lesi silingo. Nakuba ezinye ingxenye izilaleli kubhekwe uthathe leso sinyathelo kuqondiswa indlela engcono kakhulu ukudlulisa imicabango komlobi esiteji. Akuwona wonke umuntu bathandile indlela esisebenzisa ngayo imibhobho ngesikhathi isethulo. Abanye baye bedumisa zomculo iqiniso lokuthi ukuthi ulandela kuhle ngokunembile okuqukethwe umsebenzi uqobo. Ngokuvamile, iningi abasebenzisi bathola ukuthi isimiso esitholakala uma umqambi ayikwazanga aphase subtext eziyinkimbinkimbi yefilosofi inoveli, noma okungenani sihlanganise indaba engavamile isebenza nge zomculo omnene.
Umdlalo "Lo Isithombe Dorian Gray", okuyinto Izibuyekezo babekhona nabo ezahlukene, isibe mlando yangempela ekuphileni waseshashalazini yenhloko-dolobha. Kudluliswa lokhu eziyinkimbinkimbi, imisebenzi enezici enkundleni yaqashelwa abalandeli umsebenzi. Nokho, izilinganiso bebelokhu ephikisana kakhulu. Ukubuza nge twist zanamuhla, zokubhukuda engavamile, izithombe, akubona bonke ithandiwe. Ukuhlolwa iqondiswe emoyeni besikhathi sethu, abaningi babengenasithakazelo kuya esilindele. Nokho, abanye abasebenzisi ukubika umculo yasekuqaleni, abahlabeleli ezithakazelisayo, imiphumela kwikhompyutha ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. Nokho, indlela wesibili, kuye kwabangela abanye ababukeli bedidekile. Bona wazi imibono ukuthi ngenxa ukusetshenziswa ububanzi ezibukwayo ilahlekelwa umqondo umsebenzi ezigcawugcawu.
Ngakho, umcimbi obalulekile zamasiko 2014 kwaba play "I Isithombe Dorian elimpunga." Theatre Yermolova, izibuyekezo ngokuvamile omuhle, waya ukuhlola ngenxa yesithakazelo esikhulu enganciphi kule noveli. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma kakhulu ekwakhiweni iye yavusa impikiswano, le O. Menshikov umdlalo omkhulu we umlingisi iye aziswa kakhulu yibo bonke. Into eyinhloko ukugxekwa kwaba ushintsho izithombe namaqhawe. Ngakho, umfanekiso umlingiswa oyinhloko akukhona konke kwaqondwa ngokuthi rapper. Ngaphezu kwalokho, ishiya imibuzo yokuthi intombazane wasebenza njengomfundisi portrait. Kukhona kucatshangwa ukuthi indlela obungajwayelekile umqondisi wayefuna ukubonisa kuzithinta insizwa, ubuthakathaka bakhe. Ngakho ngokubeka play "I Isithombe Dorian Gray", Yermolova yaseshashalazini Izibuyekezo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo edidayo ukuze, bakwazi ukugxila imisebenzi engafiyo Umlobi oyiNgisi.
Naphezu kweqiniso lokuthi kusukela kushicilelwe noveli bekulokhu engaphezu kweyikhulu, namazwana womsebenzisi ukufakazela: umsebenzi namanje efanele. Abafundi abaningi cishe ngazwi linye bagomela ngokuthi imibono, imicabango, imizwa kanye Simoni ngokomzwelo protagonist eduze futhi efana isizukulwane samanje. Ingxenye izilaleli abanesifiso isithombe obucayi egqamile umphakathi yaseLondon okusezingeni eliphezulu, bekholelwa ukuthi umbhali wakwazi uthwebule ngokuphelele umoya isikhathi sakhe. Cishe bonke abantu abavumayo ukuthi inoveli eyinkimbinkimbi kakhulu kangaka. Futhi-ke belulekwa ukuba afunde incwadi ngaphambi uzobukela ukudlala, a zomculo noma ifilimu.
Inxanxathela incazelo yefilosofi umsebenzi akazange abashiye ubani nandaba. Ikhono yembhali isithombe kwengqondo umlingiswa oyinhloko ozithandayo. Ngesikhathi esifanayo, abaningi bathi nombhali incazelo nokucekelwa okuqhubekayo zokuziphatha yohlamvu ngakho ngokuqondile futhi ukusho lokho ncamashi kukhona imikhuba yakhe. Lapha singakhumbula incazelo endabeni Wilde, owaphawula ukuthi ngesimo Gray wonke umuntu angabona ngokwabo futhi baqonde ngamaphutha abo. Ngakho, singaphetha ngokuthi ukudalwa Oscar Wilde, naphezu yinkimbinkimbi okuqonda kanye nesakhiwo sendzaba impikiswano, baba imisebenzi odumile we-classic, isithakazelo lapho iyagcinwa kuze kube yilolu suku.
Udweba kanjani iziyalezo onkulunkulu ezinemininingwane
Klod Mone "Rouen Cathedral" - umqhele Impressionism
I-Order of the Jesuits: amaqiniso amaningana athakazelisayo okucatshangelwayo
Ukhiye inzuzo izinkomba: ifomula
Yini ukupheka ngaphandle inyama ngokushesha futhi esihlwabusayo?